Uyifaka njani imibhalo engezantsi kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifaka njani imixholo engezantsi kwiYouTube?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 228
Imibhalo engezantsi kwi-YouTube ibe sesinye sezixhobo ezilungileyo enikezelwa liqonga levidiyo elidumileyo labasebenzisi bayo. Ukufunda indlela yokuzibeka yenye yezona zinto zibalulekileyo esinokuzenza, ngakumbi ukuba sifuna ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi.
Ukuba unayo ividiyo ofuna ukuyifaka kwimibhalo engezantsi, ungayenza ngokukhawuleza nangokulula ngaphandle kokusebenzisa ezinye iinkqubo okanye iinkqubo. Ukusuka kwiqonga leYouTube uqobo uya kuba nokukhetha ukubeka imixholo engezantsi kwaye uqale ukwabelana ngomxholo wakho kubaphulaphuli ngokubanzi, umzekelo abantu abazizithulu okanye abangeva kakuhle.
Iqonga leYouTube belisebenza nzima ukufezekisa ukubandakanywa komntu wonke ngokulinganayo, nditsho nabo bantu banobunzima bokuva. Ngenxa yeso sizathu ifake ukhetho olutsha oluvumela ukongeza imixholo engezantsi kuyo nayiphi na ividiyo esiyilayishayo kwiphepha.
Imibhalo engezantsi ibalulekile ngaphakathi kweqonga levidiyo elidumileyo kwaye isizathu silula: Bayasivumela ukuba sabelane ngomxholo wethu nabaphulaphuli ngokubanzi. Ngoku unokurekhoda ividiyo ngesiNgesi, umzekelo, kwaye ungeze imibhalo engezantsi kuyo ngolunye ulwimi. Ke umxholo wakho uya kubanjwa ngabantu abaninzi.
Uyenza njani imibhalo engezantsi
Ukwenza imibhalo engezantsi ngaphakathi kweqonga leYouTube kulula. Nangona kukho iinkqubo kunye namaphepha okwenza olu hlobo lwento, awudingi ukubhenela kubo kuba isicelo seYouTube uqobo siyakuvumela ukuba ubeke ngaphandle kokuhamba eqongeni.
Uya kufuna kuphela landela la manyathelo alula ukufunda indlela yokubeka imibhalo engezantsi kwiividiyo zakho zeYouTube:
Ukufikelela kwi Studio Studio
Kwicala lasekhohlo lesikrini uza kufumana imenyu eneendlela ezahlukeneyo. Apho kuya kufuneka ukhethe apho ithi "Subtítulos"
Khetha ividiyo ofuna ukuyihlela
Cofa ku- “Setha ulwimi”Kwaye ukhethe enye oyithandayo.
Cofa ku "Qinisekisa"
Iwindow entsha izakuvela apho kufuneka ucofe iqhosha "Yongeza".
Ungayibhala ngesandla imibhalo engezantsi
Iqonga leYouTube libonelela ngeendlela ezininzi iinketho ezahlukeneyo xa ubeka izihlokwana kuyo nayiphi na ividiyo. Abasebenzisi baya kuba nakho ukubhala okanye ukuncamathisela umbhalo wokubhaliweyo weevidiyo zakho. Ngale ndlela, amaxesha emibhalo engezantsi aya kusetwa ngokuzenzekelayo.
Cofa ku- “Bhala ngesandla"
Kuya kufuneka uyidlale ividiyo kwaye Ukubhala umxholo ngamnye ukuba ufuna ukuvela kwividiyo yakho.
Kubalulekile ukuba bhala yonke into kakuhleNokuba ungongeza zonke iinkcukacha ezibonakala kwividiyo, nokuba ingabonakala ngathi ayibalulekanga. Ukuba ihlombe livakala kwividiyo yakho, emva koko ubhale igama [ihlombe]
Emva kokongeza uluhlu olupheleleyo lwezihlokwana eziza kuvela kwividiyo yakho, ekuphela kwento eseleyo yokwenza yile cofa kwindawo "yoshicilelo", kwaye ukulungele. Ividiyo yakho ngoku iya kuba nemibhalo engezantsi kwaye inokujongwa ngabaphulaphuli ababanzi nabahlukeneyo.
2 Uyenza njani imibhalo engezantsi
3 Ungayibhala ngesandla imibhalo engezantsi
Indlela yokuphuma kwi-Instagram kwi-PC?